VaMnangagwa Vanoparura Hwaro Huchashandiswa Mukurwisa Covid-19
President Emmerson Mnangagwa On CoronVirus1
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vaparura hurongwa huchatevedzerwa nenyika pakurwisa chirwere cheCoronavirus panguva iyo masangano evadzidzisi ari kukurudzira kuti zvikoro zvose zvivharwe.
Vachiparura hurongwa uhwu kuState House uhwo huri kudaidzwa kuti National Covid-19 Preparedness and Response Plan, VaMnangagwa vati ibasa remunhu wese ari munyika kuti aone kuti paagere pakashambidzika kuitira kuti chirwere che Coronavirus chisarambe chichitapuriranwa kana chichinge chazopinda munyika.
Gurukota rezvehutano, VaObediah Moyo, vatiwo vari kufara kuti chirwere ichi hachisati chapinda muZimbabwe vachiti izvi hazvifanire kuita kuti Zimbabwe irare nezamu mukanwa.
Mumiriri weWorld Health Organization muZimbabwe, VaAlex Gasasira, vatiwo chirwere che Coronavirus chiri kupararira nekukasika zvekuti chavakutoda mushandira pamwe pakati pehurumende dzepasi rose pamwe neveruzhinji.
Kunyange hazvo VaMnangagwa vakati vanhu vanodarika zana vasaungane seimwe yenzira dzekudzikisa mukana wekuti vanhu vasatapurirane chirwere ichi, mamwe masangano evarairidzi anoti zvikoro zvinofanira kuvharwawo.
Muaturiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, VaNation Mudzitirwa, vaudza Studio7 kuti sangano ravo riri kukurudzira kuti zvikoro zvose munyika zvivharwe mangwana chaiye vachiti muzvikoro zvizhinji hamuna mvura zvinowedzera mikana yekuti chirwere che Coronavirus chitapuriranwe.
Mashoko aya atsinhirwa nemunyori musangano reZimbabwe Teachers Association, VaTapson Nganunu Sibanda, avo vaudza Studio 7 parunhare vari kuBulawayo kuti vana vechikoro vakabatwa nechirwere ichi vanogona kunotapurira vamwe kudzimba chirwere ichi chopararira.
Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, VaTakavafira Zhou, vati zvikoro zvikasavharwa mangwana vachakurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzisaende kubasa kubva neMuvhuro.
Mumwe mubereki ane vana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri muHarare, Amai Blantina Mukwesha, vati vave kutyirawo hupenyu hwevana vavo izvo zviri kupa kuti vatsigire zviri kutaurwa nemasangano evarairidzi.
Gurukota rezvedzidzo, VaCain Mathema, vaudza Studio 7 parunhare kuti havataure neStudio7 vachiti havadi kubvunzwa zvinhu zvisina musoro.
Asi VaMnangagwa vakaudza vatori venhau kuState House neChipiri svondo rino kuti zvikoro zvicharamba zvakavhurwa sezvo kwangosara mavhiki matatu chete kuti zvivharwe panopera kotoro yekutanga yegore rino.
Sangano reWorld Health Organization rinoti Coronavirus yauraya vanhu vanodarika zviuru zvisere uye vanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi vanodarika mazana maviri nemakumi maviri ezviuru.